Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-India Breaking » I-Brand USA igcina i-India kuyi-Virtual Radar yayo
Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Izindaba ze-India Breaking • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
Isitatimende Sokukhululeka esibonwe esikebheni seCircle Line, eManhattan, eNew York
Imakethe yaseBrand USA ihlukile ngezindlela eziningi, hhayi okuncane kunakho konke okudluliselwe ngomyalezo ozwakalayo futhi ocacile kubabambiqhaza bezokuvakasha nezokuvakasha eNdiya ukuthi i-United States izimisele ngokubuyisela imakethe yase-India, uma uhambo selubuyele endaweni yalo, thumela i-COVID.
AbakwaBrand USA benza umhlangano ngo-Agasti 11, 2021, nababambe iqhaza abahamba phambili kwezokuvakasha naseNdiya.
Kwaphinde kwaqinisekiswa yiBrand USA ukuthi i-India ibilokhu iku-radar yayo.
Bobabili abamele i-USA ne-India balinde ngokulangazela ukuqhubeka kwezokuvakasha, ezokuvakasha, ezokundiza, ezokungenisa izihambi, noma yini ofuna ukuyibiza ngegama.
Ngisho nangesikhathi se-COVID, i-USA igcine uhlelo lwayo lokuqwashisa ngokwenzeka eNdiya. Esethulweni sango-Agasti 11, 2021, esasihlanganisa ndawonye, ​​endaweni yesikhulumi, abaholi abaphezulu bezokuvakasha nezokuvakasha abavela eNdiya, iBrand USA yaxoxa ngenhloso yayo yokuqhakambisa nokumaketha i-USA eNdiya. AbakwaBrand USA baphinde bakuqinisekisa ukuthi i-India ibilokhu ihleli kwi-radar yayo, futhi abethuli emhlanganweni banikeze amaqiniso nezibalo ukukhumbuza ababukeli ukuthi izinombolo zangaphambi kwe-COVID ngeke zihlangatshezwe kuphela kepha zingazedlula kakhulu.
Ngaphambili kokuxhuma, izinto ziyathuthuka ngezindiza eziningi ezisendaweni, futhi, uma ukuqhubeka kuya phambili. Izikhulu eziphezulu zaseBrand USA zazikhona ukutshela abadlali baseNdiya ukuthi kuningi okufana phakathi kwamazwe amabili ukukhulisa uhambo. Uhlangothi lwase-India lomhlangano obonakalayo beluholwa nguSheema Vohra osenesikhathi eside ehola ukukhushulwa kwe-US e-India.
Ukuqeqeshwa Kwezokuvakasha Kwezohambo
NgeBrand USA, umklomelo Uhlelo Lokutholwa Kwe-USA lenyuke ngama-64% ngokuqhathanisa unyaka nonyaka. Lolu hlelo lunikeza ama-webinars afundisayo futhi akhuthazayo futhi aqeqeshe ama-10,113 agents kusukela ngo-2020 kuze kube namuhla.
Ngo-2019, 1.47 million Izivakashi zaseNdiya uhambe ukuzwa i-United States, enikela ngama- $ 14.2 billion emnothweni wase-US. Ivolumu yezivakashi ezivela eNdiya behle ngama-77% ngo-2020 uma kuqhathaniswa nango-2019, kanti imali ebichithwa ibingaphansi ngama-45%. NgoJuni 2021, ukuhamba kwabagibeli bomoya bangaphandle ngokuphelele ezindaweni ezingamisi ukusuka eNdiya kuya e-US kwehle ngama-59% uma kuqhathaniswa noJuni 2019.
Iphrofayili Yesivakashi saseNdiya
Ngonyaka ojwayelekile, izifundazwe eziyi-18 zithola u-2% noma ngaphezulu kwevolumu yezivakashi zaseNdiya. Lokhu kusekela imizamo yeBrand USA yokukhuthaza ukuhambela amazwe omhlaba ezindaweni zasemakhaya noma ezingaziwa kakhulu kulo lonke elase-United States njengoba kudingwa yi-Travel Promotion Act. Ama-63% avakashela izwe elilodwa kuphela ngesikhathi sokuvakasha e-US, okuqhathaniswa nama-76% kuwo wonke amazwe aphesheya kwezilwandle. Kubusuku obulinganiselwa ezigidini eziyi-13 zamakamelo abhukhiwe ngo-2019, i-India ibeka isine ngobusuku obuningi bamagumbi kuzo zonke izimakethe. Inhloso enkulu yohambo ibhizinisi nge-35% yazo zonke izivakashi ngo-2019 - izinga eliphindwe kathathu kunesilinganiso kuwo wonke amazwe aphesheya kwezilwandle. Ezinye izinhloso zokuhamba zihlanganisa i-VFR (evakashela abangane nezihlobo); iholide / iholide; kanye nomhlangano, ingqungquthela, noma ukuhlanganyela kombukiso.
Ekuvalweni komhlangano obonakalayo, bekungekho mpendulo ecacile yombuzo obalulekile: I-virtual izothathelwa nini indawo yi-real?